Degso Google Chrome 87.0.4280.141 loogu talagalay Windows
Madal: Windows Nooca: 87.0.4280.141 Luqadda: English
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (66.70 MB)
Degso Google Chrome,
Google Chrome waa biraawsar internet fudud oo fudud oo caan ah. Ku rakib biraawsarka Google Chrome, si dhakhso leh oo ammaan ah u soco internetka. Google Chrome waa biraawsar internet bilaash ah oo caan ah kuna qalabaysan tikniyoolajiyadaha casriga ah ee Google.
Xulashada ugu horeysa ee isticmaaleyaal badan oo doonaya inay si dhakhso leh oo nabadgelyo leh uga dhex wareegaan internetka, nooca ugu dambeeya ee biraawsarka Chrome ayaa si fudud loo soo dejisan karaa adigoo gujinaya batoonka Google Chrome ee kor ku xusan, waxaad ku rakibi kartaa Chrome kombuyutarkaaga Windows. fiiro gaar ah leh astaamaha horumarsan.
Sidee loo rakibaa Google Chrome?
Iyada oo loo yaqaan Chrome, oo leh adeegsad fudud oo fudud oo adeegsade ah, waxaad diiradda saari kartaa gabi ahaanba waxa aad sameyso adoo booqanaya boggaga internetka oo aad ka qaadatid khibradaada internetka hal talaabo oo dheeraad ah.
Waxa kale oo aad fursad u leedahay inaad si fudud u qaabeysid biraawsarkaaga mahadnaqda taageerada ku-xirnaanta ee laga helo Chrome. Mahadsanid qaab-dhismeedkeeda miisaanka leh, waxaad ku sameyn kartaa raadintaada iyadoo la kaashanayo barta cinwaanka ee biraawsarka internetka kaas oo kuu oggolaanaya inaad si fudud u wareejiso in ka badan hal degel, oo leh jiido iyo hoos u dhigid taageero, waxaad si fudud ugu dhaqaajin kartaa tabka meesha aad rabto.Barraajarka ku saleysan Chromium waa mid aad u fudud soo dejinta iyo adeegsiga. Waxaad kala soo bixi kartaa feylka rakibidda biraawsarka kombiyuutarkaaga ka dib markaad riixdo badhanka soo dejinta Google Chrome ee bidixda kore.
Kadibna wuxuu shaqeynayaa qalabka dejinta,Waxaad ka heli kartaa faylasha kale ee lagama maarmaanka ah internetka.
Ku rakib Google Chrome
Buuxinta foomka otomaatiga ah, fiirinta tooska ah ee faylasha PDF-ka ee bogagga shabakadaha mahadnaq akhristaha PDF-ka ah ee la dhisay, awood u lahaanshaha inaad ku sii wadato shaqadaada meel kasta oo aad rabto xulashooyinka is-waafajinta, keydinta ereyada sirta ah iyo astaamo kale oo badan oo faaiido leh, mararka qaarkood waxaan la kulannaa wax badan Markaad tixgeliso dadka isticmaala ee daryeela ammaankooda internetka, Chrome waxay baareysaa in boggaga internetka ee aad booqatay ay amaan kuu yihiin adiga waxayna kaaga digayaan arinta marka aad isku daydo inaad gasho degel loo calaamadeeyay inuu waxyeello u leeyahay sinnaba. Intaas waxaa sii dheer, mahadsanidiin Habka Asturnaanta ee biraawsarka, waxaad ku dhex baari kartaa boggaga internetka si qarsoodi ah adiga oo aan raad ka tagin.Browser-ka, oo si joogto ah loo cusbooneysiiyo loona sii wado in lagu horumariyo iyadoo la waafajinayo baahida isticmaaleyaasha, wuxuu sidoo kale si otomaatig ah u siiyaa xulashooyin cusboonaysiin ah.
Qaabkan, waxaad si joogto ah u adeegsaneysaa noocii ugu dambeeyay, ee aan qaladka lahayn oo la hagaajiyay ee biraawsarka Gabi ahaanba gacantaada ayey ku jirtaa inaad qibradaada internetka u qaado hal talaabo oo dheeri ah adiga oo ku siinaya biraawsarka ku siinaya astaamo kasta oo biraawsarka internetka uu bilaash ku haysto.
Google Chrome Noocyada
Cabirka Faylka: 66.70 MB